ဓမ္မရသ: သိသင့်လို့ ဖြေပါတယ်၊
aသတ်သတ်လွတ်နဲ့ ပက်သက်လို့ ဒေ၀ဒတ်က စခဲ့တယ်လို့ ကြားဖူးခဲ့ပါတယ်။ အခု ဒီတရားနဲ့ ပက်သက်ပြီး နာချင်ခဲ့ပါတယ်။ တရားဖွင့်လို့မရပါဘူး။
အားရတယ်ဗျာ။ အရမ်းကို အားရတယ်။ သာဓု အခွန်းပေါင်း မြောက်မြားစွာခေါ်ပြီး။ ဦးပါ အကြိမ်ကြိမ်ချ သွားပါတယ်။ သာမည ဆရာတော်ကြီးကိုလည်း အကြိမ်ကြိမ်ဦးတိုက်ပါတယ်။
ဒီပို့စ်ကို စိတ်ဝင်တစားကို စောင့်ဖတ်ခဲ့တာပါ။ ဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာ လေးလေးနက်နက် သာဓုအကြိမ်ကြိမ် ခေါ်ပါတယ် မောင်လေး အောင်ဦးရေ... တရားလည်း နာနေပါတယ်...
ကိုအောင်ဦး အရမ်းကောင်းပါတယ် . အမေးနဲ့အဖြေနဲ့ ဖတ်ရတာ အရမ်း အကျိုးကျေးဇူးရှိုပါတယ် ရှင်...
အရမ်းအကျိုးရှိပါတယ် .. တရားတော့မနာရသေးဘူး .. အိမ်ရောက်မှ ..း)
Dear U Aung Oo or Ko Aung Oo,
Could we please listen more of discussion dhamma between A Shin Say Kein Da & others monks? (please)